Sariirta & Mats Soosaarayaasha - Shiinaha Sariiraha & Alaabada Bixisa & Warshadda
Is-qaboojinta Butros Mat Gel Dog Mat Heelie Relief
2020 cusub suufka barafka ugu fiican, adoo adeegsanaya walxaha kuleylka tooska ah u baxa, kaliya waxay u baahan yihiin toban daqiiqo si ay u dhigaan waxay isticmaali karaan afar ilaa shan saacadood. Dusha sare ee xariirta jilicsan waxay ka kooban tahay iskudhafyada barafka, oo si tartiib tartiib ah u dhalaali doona ka dib nuugista kuleylka si loo gaaro shaqada faafitaanka kuleylka. Samee xayawaanka rabaayadda ah ee ka cabsada kuleylka inay aad ugu raaxaystaan ​​xagaaga.
Eyga Sariirta Sareysa ee Sariirta Korantada Lagu Kiciyey Sariirta Xayawaanka Dibedda
Nooca cusub ee qaabka ubaxa qaabka ubaxa ah ee loo yaqaan 'charpoy', u isticmaal dharka 600D Oxford ee biyuhu ka soo horjeedaan iyo ka-hortagga iyo silsilad bir ah oo xambaarsan culeys xoog leh, waxay ku habboon tahay eeyaha waaweyn. Laba cabbir oo kala duwan oo aad adigu dooran kartid. Gogosha qaabka ubaxa waa mid la saari karo, laguna qalabeeyey bac lagu keydiyo. Ku habboon helitaanka.Waxay ku habboon tahay ka-bogsashada cudurka maqaarka ee xayawaanka iyo ilaalinta wadajirka Sidoo kale waxay u fiicantahay cayaaraha banaanka.
Furaash Dog waaweyn oo Furaash Xashiish Xashiish Xashiish Xaraash ah
Tilmaamaha Tilmaamaha Sariirta xumbada xumbada adag ee bixisa raaxada oo dhan sida qiimaha sariiraha xayawaanka sare ee qaaliga ah ee qiimaha aan caadiga ahayn. Bixinta taageerada ugu dambeysa, sariirtaan xayawaanka ah ee cajiibka ahi waa habka ugu fiican ee lagu tuso xayawaankaaga inaad runti daryeesho. Waxay ku habboon tahay eeyaha leh dhibaatooyin caafimaad oo muddo dheer ah ama ka soo kabanaya jirro, maadaama ay la jaanqaadayso wareegyadooda, yareynta cadaadiska dhabarka iyo kala-goysyada, iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda xumbada. mahadsanidiin sida ay ugu habboontahay qaabka jirka, wax ku ool ah ...
Furaashka Eey Biyo Maroodiga ah ee Dhigga Barkinta Dusha Dibadda
Tilmaamaha Tilmaamaha Naqshadeynta biyaha si loo daboolo baahiyaha kala duwan. Ku habboon safarka, safarka, kursiga fadhiga, gaariga (jirridda, kursiga dambe, sanduuqa gaadiidka), beerta dhexdeeda, xerada iyo balakoonka. Hal dhinac oo ka mid ah derinku wuxuu ka samaysan yahay dhar dhaadheer oo cufan oo Oxford ah, dareere ma dhaafi doono. Naqshadeynta hoose ee aan taraarax lahayn waxay siisaa badbaado badan xayawaankaaga. Qeexitaannada Midabka: Waxyaabaha Khaki: Waxyaabaha Oxford + Dharka Cotton + Qiyaasta PVC: 92cm * 64cm Miisaanka Alaabada: 850g / 1.87lb 1. Intaa waxaa dheer, waxaan ...
Furaashka Eeyga Weyn ee Hurdada Mat derbiga Buluug Buluug ah
Astaamaha Sharaxaadda Naqshadeynta sariirta eyga waxay ku saleysan tahay furaash, oo leh aag ballaadhan oo leydi ah oo loogu talagalay 4ta lugood ee lugta leh si aad u kala bixisid, u seexatid ama aad ugu raaxaysatid raaxo. Xariijimo cad iyo buluug ah ayaa daabacan, nadiif ah oo casri ah. Buuxinta suufka 'premium 3D' ， wuxuu keenaa dabacsanaan sare per awoodsiin heer sare ah iyo taageero weyn oo loogu talagalay xayawaankaaga. Waxaa lagu heli karaa saddex cabbir. Daboolka la qaadi karo. Mashiinka la dhaqi karo. Noocyada soocida Midab: Cadaanyo & Buluug Waxyaabaha: Canvas + PP Cadka Buuxinta Cadka: S: 50cm * 35c * 10cm / M: ...
Boorsada Dog Transparent Bag Car side Boorsada Boorsada eeyaha Cage
Astaamaha Sharaxaad Ka caawi xayawaankaaga inay si nabad ah ku yimaadaan oo qaab ahaadaan side xayawaankan jilicsan. Loogu talagalay in lagu ilaaliyo xayawaankaaga la ilaaliyo, amni ahaan, iyo raaxo leh. Xayawaankan xayawaanka casaanka ah iyo cawlku si fiican buu u shaqeeyaa markuu ku safrayo diyaarad ama baabuur ama safarada caadiga ah ee dhakhtarka xoolaha. Terrier-ka ilaa taby weyn, xayawaan-qaadaha xayawaanka dhexdhexaadka ahi wuxuu qaadaa bisad ama ey ilaa 16 rodol (7.26 kg). Sariirta xayawaanka dhogorta leh ee jilicsan ayaa gebi ahaanba laga saari karaa oo lagu dhaqi karaa mashiinka, side waa in lagu arkaa nadiifinta kaliya. Takhasus ...
Astaamaha Sharaxaadda Sariirta duudduuban ee dameerka ah waxay ka samaysan tahay qiimo sarreeya, waxaana buuxiya suufka 'PP', buurbuuran iyo dhumuc weyn, oo aan ka cabsanayn cillad, adkaysi wanaagsan iyo taageero, neefsasho iyo raaxo leh, duubista naqshad wareegsan waxay siinaysaa xayawaankaaga meel raaxo leh oo lagu jiifo, lagu salaaxo, ama seexdo. Qeexitaannada Midab: Waxyaabaha Madow: Baaxadda + PP Cadka Buuxinta Cudurka: 50cm * 50cm Miisaanka Badeecadda: 300g 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiinno badeecadeenna xilliyada qaarkood si aan u sii wadno feejignaanta deve ugu dambeysay ...
Eyga La qaadan karo ee Mat Dog-ga ah ee lagu kariyo suufka suufka
Waxyaabaha sharaxaadda ah Waxyaabaha gudaha ku jira waxaa ka buuxsamay cudbi oo sagxaduna ma siibaneyso. Waxay ilaalin doontaa alaabta guriga, gaariga iyo sagxadda .Waxaa ku habboon in la dhigo dusha sare sida fadhiga, sagxadda, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro raaxo dheeraad ah xayawaankaaga xayawaanka qaada iyo guriga xayawaanka dibadda. Sooc Midabka: Waxyaabaha Cawl Fudud: Canvas + PP Size Cotton Size: ...
Rog Dog Sofa Butros Basket Bed Bed Yellow Cotton Nest
Astaamaha Sharaxaadda Sariiraha eyga ayaa ah kuwo aad u jilicsan oo jilicsan, oo ku siinaya saxaaraddaada booska ugu dambeeya ee hurdo xilli kasta oo maalintii ah. Sariirta waxay leedahay naqshad casri ah oo casri ah waxayna si aan caadi aheyn ugu habboon tahay dulucda iyo qurxinta noocyo badan oo qol ah. Sariirtan waa mashiin lagu dhaqi karo nadiifin iyo daryeel fudud, xitaa haddii xayawaankaaga xayawaanka ahi ku soo fuulaan baalal wasakh ah ama dhogor qoyan. Sariirta oo dhan waa la dhaqi karaa iyadoo hal unug ah, looma baahna in daboolka laga qaado. Tilmaamaha Midabka: Waxyaalaha buniga ah + Jaalaha ah: Co ...
Ey Mat Kursiga Daboolida Bootka Difaaca Baabuurka Mat
Tilmaamaha Tilmaamaha Fudud ee rakibidda, caddaynta biyaha, dhumuc weyn, aan simbiriirixan, waa difaac weyn oo loogu talagalay kursigaaga gaariga. Waxay ka ilaalin kartaa kursigaaga gaariga inuu wax qabsado, xoqin, ama saxaro eeyahaaga xayawaankaaga ah. Qeexitaannada Midab: Waxyaabaha Madow: Cabbirka Dharka Oxford: 47cm * 46cm * 23cm 1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiinno badeecadeenna xilliyada qaarkood si aan u sii wadno inaan fiiro gaar ah u yeelano horumarkii ugu dambeeyay ee la xiriira eeyaha oo aan u siino eeyo aad u caafimaad leh. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan xorriyad ...
Eyga Kaamamka La Qaadan Karo ee Sariirta ee Sarreeya Sariirta Birta lagu qaabeeyey
Astaamaha Sharaxaadda Tani waa sariirta ugu dambeysa ee xayawaankaaga oo ka caawin doonta inay helaan hurdo wanaagsan Habeen waxaa la sara kiciyaa sagxadda si ay uga caawiso qaboojinta bilaha xagaaga iyo inay ka ilaaliso xayawaankaaga dabaqyada qabow inta lagu jiro xilliga qaboobaha. waa fikrad aad u fiican isticmaalka guriga gudihiisa ama dibeddiisa ama markaad safreyso ama aad u socoto safar kaam ah. Waxay leedahay qaab bir ah oo xoog leh oo leh maro lagu daboolayo. Si fudud ayaa loo isugu soo ururin karaa loona kala bixi karaa. Waxay leedahay dhismo khafiif ah oo adag oo awood u siinaya boggaaga ...